लगानी बोर्डको सीईओमा खतिवडालाई ल्याउने खतिवडाको रणनीति, कानुनमै नभएको उपसमिति गठन| Corporate Nepal
साउन १२, २०७७ सोमबार १८:४०
काठमाडौं । ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको लगानी बोर्डमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो विश्वासपात्रलाई ल्याउने योजना बनाएका छन् । उनले बोर्डमा यसअघि परामर्शदाताको रुपमा काम गरेर छाडेका रामकृष्ण खतिवडालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो ।
छनोट समितिले १२ जना आवेदकहरुमध्येबाट सुशील भट्ट, सुशील ज्ञवाली, लक्ष्मीविलाश कोइराला, डा. सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडालाई सर्टलिष्टिङ गरेको छ । समितिले तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा संयोजक रहेको र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल र आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष डा. कँडेल सदस्य रहेको छनोट समितिले यसअघि सर्टलिष्टिङमा परेको भन्दै फरक फरक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट पनि बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा निकै चलखेल भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कानुनमै नभएको उपसमिति गठन
सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समिति आफैले आवश्यक प्रक्रिया गर्नुपर्नेमा कानुनमा नभएको उपसमिति बनाइएको छ । छनोट समितिले उपसमिति बनाएर उम्मेदवारहरुलाई नम्बर दिनमिल्ने व्यवस्था कानुनमा देखिन्न् ।
कुल १०० नम्बरमध्ये उपसमितिले दिएको ७० नम्बरको आधारमा पाँच जनालाई प्रस्तुतीकरणका लागि शुक्रबारको लागि बोलाइएको छ । बाँकी ३० नम्बरको निर्णय प्रस्तुतीकरणपछि समितिले दिनेछ । मन्त्री खतिवडाले बनाउन लगाएको उपसमितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव राजन खनाल र प्रशासकीय अदालतका डिल्लीराज घिमिरे सदस्य छन् ।
उपसमिति बनाउँदा आफूमाथि दोष पनि नआउने र आफूले रोजेकोलाई पनि बनाउन सकिने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्लेषण देखिन्छ । महाप्रसाद अधिकारी मन्त्री खतिवडाका भरपर्दा व्यक्ति हुन् । गभर्नर हुँदा निकै सहयोग गरेकाले खतिवडाले महाप्रसादलाई गभर्नर बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।
राजन खनाल पनि खतिवडाका सहयोगी मानिन्छन् । उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने इच्छा देखाए पनि महाप्रसादलाई नबनाई नहुने अवस्था आएपछि उनलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख नियुक्ति गरिदिएका थिए । रामकृष्ण खतिवडालाई सीईओ बनाउन सकियो भने बोर्डमा आफूअनुकुलका निर्णयहरु पनि गर्न सकिने र यसअघिका अधुरा कामहरु पनि पूरा हुने विश्वास मन्त्री खतिवडा र गभर्नर अधिकारीको रहेको छ ।
यसअघि महाप्रसादलाई बोर्डको सीईओ बनाउने क्रममा प्रस्ताव र प्रस्तुतीकरणका सबै डकुमेन्ट रामकृष्ण खतिवडाले तयार गरिदिएका थिए । बोर्डमा पनि उनले महाप्रसादको निजी सहयोगी जस्तो भएर काम गर्ने गरेको बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बोर्डमा उनी पूर्वाधार हेर्ने परामर्शदाताको रुपमा काम गर्थे । त्यहाँ छोडेर विद्युत नियामन आयोगको सदस्य हुन गएका खतिवडा काम गर्न नसकेपछि आफै राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर अधिकारीसँग कुरा गरेपछि खतिवडाले बोर्डको सीईओ हुन अघि बढेका थिए ।
सर्टलिष्टिङमा परेकाहरुमध्ये उनी अनुभव र योग्यताले निकै जुनियर भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले पिकअप गर्ने तयारी गरेका हुन् । अर्का उम्मेदवार सुशील भट्ट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । प्रचण्डले नै उनलाई योजना आयोगका सदस्य बनाएका थिए ।
आयोगको सदस्य भएर माननीय भइसकेको व्यक्ति लगानी बोर्डमा जान राम्रो हुन्न भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उनलाई सिफारिस नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् । यद्यपि भट्टलाई सीईओ बनाउन प्रचण्डको चर्को दबाब रहेको स्रोतको भनाई छ । अर्का उम्मेवार सुशील ज्ञवाली नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलका विश्वासपात्र हुन् ।
हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओसमेत रहेका उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै बोर्डमा जाने इच्छा देखाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राधिकरणको काम नसकिएको भन्दै त्यो ठाउँ नछोड्न सल्लाह दिएकाले उनको बोर्डमा हुने संभावना कम रहेको बताइन्छ । बाँकी दुई उम्मेदवारहरु डा. सरोज कोइराला र लक्ष्मीविकास कोइरालालाई कस्को समर्थन हो ? खुल्न सकेको छैन् ।
कसरी मिलाइँदैछ नम्बर ?
अर्थमन्त्री खतिवडा आफू संयोजक रहेको समितिमार्फत नम्बर दिएर रामकृष्ण खतिवडालाई सीईओ नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्दा विवाद हुने भएकाले उपसमिति बनाएर अघि बढेका छन् । अब मुल समितिले दिने नम्बरमध्ये ७० नम्बर उपसमितिले दिइसकेको छ, जसमा पहिलो नम्बरमा रामकष्ण खतिवडा रहेको स्रोतको दावी छ । उपसमितिले अध्ययन, अनुभव र लिखित प्रस्तावका आधारमा ७० नम्बरको निर्णय गरेको छ ।
त्यसपछि समितिले प्रस्तुतीकरणमा २५ र व्याक्तित्वमा दिइने पाँच नम्बरको निर्णय गर्नेछ । मुल समितिका संयोजक नै आफ्नै मान्छे भएकाले रामकृष्णलाई पहिलो उम्मेदवार हुन कुनै कठिनाई देखिदैन् । त्यसरी प्रक्रियागतरुपमा मिलाएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सहज हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको योजना छ । त्यसमाथि खतिवडालाई बनाउन गोकुल बास्कोटासमेत सक्रिय ढंगले लागेकाले रामकृष्ण खतिवडाको भाग्य चम्किने जानकारहरु बताउँछन् । रामकृष्ण खतिवडा पनि गोकुल बास्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेका हुन् ।
जलविद्युतमा पाँच खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक लगानी
उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद गठन, अध्यक्षमा संघई
पुस २०, २०७७ मंगलबार
उद्योगपति पवन गोल्याण औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा नियुक्त
स्वदेशी किसान र साना उद्यमीहरु विस्थापित हुनेगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला
भेट्न आएको महासंघको टोलीलाई राष्ट्रपतिको सुझावः परनिर्भरतालाई ब्रेक गर्न उत्पादन बढाउनुहोला
ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरु भकाभक उल्ट्याउँदै बाइडेन
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खुद नाफा ४.७७ प्रतिशतले घट्यो